Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Martinique » Sidina avy any Etazonia mankany Martinique amin'ny American Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao farany Martinique • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina avy any Etazonia mankany Martinique amin'ny American Airlines izao.
American Airlines dia hampiasa ny fiaramanidina Embraer 175 miaraka amin'ny seza 76 ho an'ny sidina sidina maharitra adiny telo sy sasany avy any Etazonia mankany Martinique.
Maherin'ny 35 ny toerana itodiana any amin'ireo nosy, amerikanina no fiaramanidina mankany amin'ny Nosy Karaiba frantsay any Martinique.
American Airlines, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka amerikana lehibe indrindra, dia mpiara-miasa maharitra amin'ny Island of Flowers.
Manomboka amin'ny 6 Novambra, American Airlines dia hanomboka ny serivisy tsy an-kiato eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami sy ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Aimé Césaire any Fort-de-France.
Ny sidina mankany Martinique avy any Etazonia dia hitohy noho ny American Airlines. Manomboka amin'ny 6 Novambra, hanomboka ny serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Aimé Césaire ao Fort-de-France ny mpitatitra. Ny sidina dia hiasa indray mandeha isan-kerinandro amin'ny asabotsy alohan'ny hitomboana intelo isan-kerinandro amin'ny talata, alakamisy ary asabotsy ho an'ny krismasy ary ny tapany faharoa amin'ny volana febroary hatramin'ny martsa.
"American Airlines, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka amerikana lehibe indrindra dia mpiara-miasa maharitra amin'ny Nosy voninkazo", "hoy ny kaomisera Martinique fizahantany Bénédicte di Geronimo. “Izany no antony mahafaly anay mandray an-tanan-tsambatra ny mpitatitra amerikanina lehibe sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Ny fanandramana an'i Martinique dia azo antoka fa handresy lahatra ireo mpitsidika anay amerikana ny antony nahazoan'ny Martinique fanomezam-boninahitra volamena vao haingana tao amin'ny Travel Weekly's 2021 Magellan Awards ho an'ny tanjona "Green" Friendly Eco-Friendly, dia nomena anarana # 1 Destiny mipoitra eran'izao tontolo izao amin'ny 2021 avy amin'ny Tripadvisor , tsy manisa ireo fanavahana roa natolotry ny UNESCO tato ho ato momba ny lakana nentim-paharazana Yole Boat ary koa ny harenan'ny biodiversitenay ”.
“Misy 35 ny toerana itodiana any amin'ireo nosy, amerikanina no zotram-piaramanidinao mankany amin'ny Nosy Karaiba frantsay Martinique, hoy i Evette Negron, talen'ny Sales Sales ao amin'ny American Airlines. "Fahafinaretana tokoa ny manolotra ho an'ireo mpandeha amerikana ny fotoana hahitan'izy ireo ny hatsarana sy ny tantara manankarena an'i Martinique amin'ny filaminana rehetra, hatramin'ny fotoana nanamafisany ny fehikibony."
Ny fiaramanidina Embraer 175 misy seza 76 dia hampiasaina amin'ny sidina maharitra adiny telo sy sasany.